Goynta Laser ee Xumbo
Xalalka Goynta Laser-ka ee Xumbo
Xumbadu waa wax aad u fiican oo loogu talagalay farsamaynta laysarka. CO2 laser jarayaayaa awood u leh inay si fiican u gooyaan xumbo. Marka la barbardhigo hababka goynta caadiga ah sida feerka dhinta, heer sare oo sax ah iyo tayada ayaa lagu gaari karaa xitaa dulqaad aad u adag iyada oo ay ugu wacan tahay dhamaystirka dhijitaalka ah ee laser. Goynta laser-ku waa hab aan xidhiidh la lahayn, markaa looma baahna in laga walwalo xidhashada qalabka, hagaajinta, ama tayada liidata ee geesaha goynta. Waa suurtogal in la gooyo ama lagu calaamadiyo saxnaanta cajiibka ah iyo dulqaadka adag ee qalabka Goldenlaser's CO2 laser, haddii xumbadu ku timaado duub ama go'yaal.
Isticmaalka warshadaha ee xumbo ayaa si weyn u koray. Warshadaha xumbo ee maanta waxay bixiyaan agab kala duwan oo kala duwan oo la isticmaalo. Isticmaalka qalabka laysarka sida qalab loogu talagalay goynta xumbo ayaa sii kordheysa ee warshadaha. Tignoolajiyada goynta laser-ku waxay si dhakhso ah, xirfad leh, oo kharash-ool ah u beddeshaa hababka kale ee farsamaynta caadiga ah.
Xumbo ka samaysan polystyrene (PS), polyester (PES), polyurethane (PUR), ama polyetylen (PE) ayaa ku habboon goynta laysarka. Qalabka xumbo ee dhumucyada kala duwan ayaa si fudud loo gooyn karaa awoodo laser kala duwan. Laser-ku waxay bixiyaan saxda ah in hawlwadeenadu ay dalbadaan codsiyada goynta xumbo ee u baahan cidhif toosan.
Nidaamyada laysarka ee lagu dabaqi karo xumbo
Ⅰ. Goynta Laser
Marka laydhka tamarta sare leh uu ku dhaco dusha xumbada, maaddadu way uumi isla markiiba. Tani waa hab si taxadar leh loo habeeyey oo aan ku dhawaad ​​​​kuleylin walxaha ku hareeraysan, taasoo keentay cilladda ugu yar.
Ⅱ. Laser xardho
Laser-ku-sixidda dusha xumbo-du waxay ku kordhinaysaa cabbir cusub xumbo-goynta laysarka. Calaamadaha, cabbirrada, tilmaamaha, digniinaha, nambarada qaybta, iyo wax kasta oo kale oo aad rabto ayaa dhammaantood lagu xardhay laser. Faahfaahinta xardhan waa cad yihiin oo nadiif ah.
Waa maxay sababta loo jarayo xumbo laser?
Goynta xumbo leh leysarka waa hab caadi ah maanta sababtoo ah waxaa jira doodo sheegaya in goynta xumbo ay noqon karto mid ka dhakhso badan oo ka saxsan hababka kale. Marka la barbardhigo hababka farsamada (sida caadiga ah feero), goynta laysarka waxay bixisaa goyn joogto ah iyada oo aan la jarin ama waxyeellayn qaybo ka mid ah mishiinka ku lug leh khadadka wax soo saarka - oo uma baahna wax nadiifin ah ka dib!
Goynta laser-ku waa sax oo sax ah, taasoo keentay goyn nadiif ah oo joogto ah
Xumbada si dhakhso ah oo fudud ayaa loo gooyn karaa iyada oo la isticmaalayo qalabka laser
Goynta Laserku waxay ka tagtaa gees siman oo ku taal xumbo, taas oo sahlaysa in lagu shaqeeyo
Kuleylka laydhka laysarka ayaa dhalaaliya cidhifyada xumbo, abuurista cidhif nadiif ah oo xiran
Laser waa farsamo si heer sare ah loo laqabsan karo oo leh adeegsiyo u dhexeeya prototyping ilaa wax soo saarka tirada badan
Laserku waligii ma damqan doono ama caajisi maayo sida qalabyada kale ay u samayn karaan waqti ka dib iyo isticmaalka sababtoo ah dabeecadda aan la xidhiidhin
Mashiinnada laysarka ee lagu taliyay xumbo
Qalabka laser-ka ee 13090
Cabbirka sariirta: 1300mm×900mm (51"×35")
CO2 tube laser galaas 80 watts ~ 300 watts
Qalabka laser-ka ee 160100
Hal madax / madax labalaab ah
Cabbirka sariirta: 1600mm×1000mm (63" ×39")
CO2 tubada leysarka dhalada ah
Laydhka muraayadda CO2 / laser CO2 RF
Xawaaraha sare iyo dardargelinta
Makiinado badan oo CO2 laser ah oo ka yimid dahabka dahab ah
Goynta xumbo leh laysarka sida qalab beddelka ah waa suurtogal
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in marka ay timaado jarista xumboyada warshadaha, faa'iidooyinka isticmaalka laser ee qalabka goynta caadiga ah ayaa muuqda. Goynta xumbo leysarka waxay bixisaa faa'iidooyin badan, sida processing hal-tallaabo, isticmaalka ugu badan ee alaabta, processing tayada sare leh, nadiif ah oo sax ah goynta, iwm Laserku wuxuu ku guulaystaa xitaa dulucda ugu yar iyada oo la adeegsanayo gooyn laser sax ah oo aan xiriir la lahayn. .
Si kastaba ha ahaatee, mindida ayaa cadaadis weyn saaraysa xumbo, taasoo keentay in walxaha qallafsan iyo geesaha gooyay wasakh ah. Markaad isticmaalayso jet-biyoodka si loo gooyo, qoyaanka ayaa lagu nuugaa xumbo nuugista, taas oo ka soocaya biyaha gooynta. Marka hore, walaxda waa in la qalajiyo ka hor inta aan loo isticmaalin habayn kasta oo xiga, taas oo ah hawl waqti-qaadasho ah. Goynta laysarka, tallaabadan waa la booday, taasoo kuu ogolaanaysa inaad ku noqoto shaqada alaabta isla markaaba. Taas bedelkeeda, laysarka ayaa aad u soo jiidanaya oo aan shaki ku jirin inuu yahay farsamada ugu waxtarka badan ee farsamaynta xumbo.
Waa maxay noocyada xumbada la jari karaa laser?
• Xumbo polypropylene (PP).
• Xumbo polyetylen (PE).
• Polyester (PES) xumbo
• Polystyrene (PS) xumbo
• Polyurethane (PUR) xumbo
Codsiyada caadiga ah ee xumbo goynta laysarka:
• Gawaarida gudaha ah
• suufka alaabta guriga
• Sagxadda doonta
Baakadaha (qalabka hadheeyay)
• Dahaarka dhawaaqa
• Kabaha suuf ah
Daawo laba madax goynta laser-ka goynta xumbo-goynta ficil ahaan!
Ma jeclaan lahayd inaad hesho ikhtiyaarro badan iyo helitaanka Mashiinnada Laser-ka ee Goldenlaser iyo Xalka si aad ugu darto qiimaha khadkaaga? Fadlan buuxi foomka hoose. Dhakhaatiirtayada takhasuska leh ayaa had iyo jeer ku faraxsan inay ku caawiyaan waxayna kugu soo laaban doonaan isla markiiba.